TURXAAN BIXINTA NOLOSHA QOYSKA IYO WAAJIBAADKA NINKA – Biyacade
November 16, 2014 January 30, 2015 biyacade
TURXAAN BIXINTA NOLOSHA QOYSKA IYO WAAJIBAADKA NINKA
Dumarka badan oo uu caddaalad wax ugu qaybiyo:- Ninku hadduu dhowr xaas qabo, waa inuu si caddaaladi ku jirto wax ugu qaybiyo. Kolkuu dal kale amaba deegaan kale u safrayo, doonayana inuu mid kamid ah dumarkiisa sii kaxaysto, waa inuu u qori tuuraa sida uu Rasuulkuba (Sallallaahu calayhi wasallam) yeeli jiray. Haddii habeen uu middood la baryi lahaa ka baaqdana, waxa ku waajib ah inuu dib uga gudo. Rasuulkeenna suubbani (Sallallaahu calayhi wasallam) kolkuu xanuunsanaa ooy ajashiisii soo dhowaatay, waxaa lagu wareejin jiray oo uu midba habeen la baryi jiray dumarkiisa, inkastoo uu Caa’ishah ugu jeclaa. Isagoo xaalkiisu sidaa yahay buu maalin weydiiyey dumarkii: (Xaggeen ahay berrito?), markaas midbaa garatay ulajeeddadiisa oo tiri: “Wuxuuu doonayaa inuu idin weydiiyo maalintii Caa’ishah waa goorma”. Haweenkii kolkaas bay yiraahdeen: “Rasuulkii Allow idan baan kuu siinnay inaad guriga Caa’ishah iska joogto maxaa yeelay waa kugu dhib in habeen walba meel laguu xambaaro”, markaas buu yiri: “Ma raalli baad ka tihiin sidaas”, say yiraahdeen: “Haah”, markaas buu yiri: “Ii duwa gurigii Caa’isho”.
– Isafgaranwaa iyo Dagaal aloosma:- Haddii ninka iyo xaaskiisu ismaandhaafaan oo dhibaato ay xallin waayaan timaado, waxay diintu qabtaa in la saaro laba garsoore; mid ka socda qaraabada ninka iyo mid ka socda qaraabada naagta, si ay u eegaan arrinka meesha yaal iyo siday dib-u-heshiisiin uga dhex dhalin lahaayeen labada ruux, hadday wanaag doonayaanna Ilaah baa waafajinaya. Haddii haddaba ay belaayadu ka socoto dhanka naagta oo aanay dooneyn wanaag kuwada noolaasho waxa loogu yeeraa (Naashiso). Naashisada iyo naagta aaan salaadda tukan, waxa loo baahan yahay inuu ninku waaniyo, u digo, cabsiiyo, dhowr habeenna dhabarka u jeediyo (waa gogosha uune ma’aha inuu guriga oo dhan uga guuro). Hadduu intaa wax uga keeni waayana, waa inuu markaa garaacaa. Garaacuse waa inuusan ahaan mid xanuujiya, waana in aanu wejiga ka garaacin, laf ka jebin, dhiigna ka keenin. Rasuulka (Sallallaahu calayhi wasallam) waxa la weydiiyey: (Muxuu yahay xaqqa ay naagtu ninkeeda ku leedahay?), markaas buu ku jawaabay: (Inuu quudiyo hadduu quuto, inuu dhar u iibiyo hadduu asba iibsado, inaanu wejiga ka cayn kana garaacin, inaanu dil dhaawaca dilin, hadduu ka guurayana gogosha uun kudhex guuro).
– Inuu ugu af-billaabo Timir ama Xalwo. Asmaa’ binti Abii-Bakr (RC) oo ahayd Caa’ishah (RC) walaasheed iyo xaaskii saxaabigii weynaa Subayr ibnu Cawwaam (RC), waxaa laga weriyey: (Cabdullaahi ibnu Subayr baan ku dhalay “Qubaa’”, markaas baan intaan Rasuulka “Sallallaahu calayhi wasallam” u keenay, dhabta u saaray, markaas buu dalbaday in Timir loo keeno, oo intuu calaaliyey afka ugu tufay).
Previous TURXAAN BIXINTA NOLOSHA QOOYSKA IYO WAAJIBAADKA NINKA
Next TURXAAN BIXINTA NOLOSHA QOYSKA WAAJIBAADKA NAAGTA